Hogaamiyaha Xisbullah oo ku hanjabay in Maraykanka iyo Israel uu burburin doono. – Xeernews24
Hogaamiyaha Xisbullah oo ku hanjabay in Maraykanka iyo Israel uu burburin doono.
15. Dezember 2017 /in WARAR/NEWS /von admin
Hogaamiyaha ururka Xisbullah ee dalka Lubnaan Xasan Nasrallah ayaa ku dhaartay in uu baabi’in doono dalka Maraykanka waxana uu ku baaqay Jihaad in lagu qaado magaalada Qudus, kadib markii toddobaadii hore Madaxweynaha Maraykanka u aqoonsaday magaalada barakaysan ee Qudus inay tahay caasimada Israel.
Xoghayaha Guud ee Xisbullah ayaa qudbad ka jeediyay taleefishin xaruntiisu tahay Beirut iyadoo kumanaan taageerayaashiisa ka mid ahna ay meel fagaare ah isugu soo baxeen waxayna ku dhowaaqayeen ”Ha Dhinto Maraykanka”.
“Waa waqtigii qof walba uu ogaan lahaa in Maraykanku uusan taageerin Nabada Falastiin iyo tan gobolkaba,”ayuu yidhi Nasrullah. Waxana uu sidoo kale ku baaqay in malaayiin Muslimiin ah oo jihaadaya ay abaaraan magaalada Qudus.
“Maraykanka waa maalgeliyaha argagaxisada,dadka dhulka xoog ku haysta ee Yuhuuda,waana kan abuuray ISIS iyo ururada Takfiirka,”ayuu sii raaciyay wadaada Shiicada ah ee reer Lubnaan.
Nasrullah ayaa sheegay in qof walba oo Muslim ah ay tahay in Maraykanka uu aqoonsado oo kaliya “Ha Dhinto Maraykanka”, waxana uu ugu baaqay taageerayaashiisa in ay uga dhigaan aqoonsiga Trump ee Qudus mid bilow u ah dhamaadka Maraykanka iyo Israel.
Ururka uu hogaamiyo Xasan Nasrallah ayaa dagaal la galay dowlada Israel sanadkii 2006dii waxayna labada dhinac marwalba ay is dhaafsadaan ereyo hanjabaadyo ah, hase yeeshee wasiir u hadlay Israel ayaa sheegay in haddii Xisbullah uu weerar ku soo qaado inay beegsan doonaan dalka Lubnaan.
Hase yeeshee wasiirka sirdoonka Yisrael Katz ayaa ku hanjabay haddii uu ururka Xisbullah weerar ku soo qaado Israel in dalka Lubnaan dhulka ay dhigi doonaan oo uu dib ugu laabanayo waayihii hore ee “Facii ama qarnigii Dhagaxa”.
Maanta oo Jimce ah ayaa la filayaa inbanaanbaxyo waaweyn ay ka dhacaan caalamka Islaamka iyadoo loogaga soo horjeedo aqoonsiga dowlada Maraykanka ay u aqoonsatay magaalada Qudus xarunta Israel,sidoo kale banaabaxyada ayaa lagu taageerayaa warkii ka soo baxay shirkii aan caadiga ahayn ee wadamada Islaamka kaasoo loogu aqoonsaday in Bariga Qudus ay tahay caasimada Falastiin.
https://www.xeernews24.com/wp-content/uploads/2017/12/hassan.jpg 429 634 admin https://www.xeernews24.com/wp-content/uploads/2017/06/xeernews-1.png admin2017-12-15 11:52:542017-12-15 11:52:54Hogaamiyaha Xisbullah oo ku hanjabay in Maraykanka iyo Israel uu burburin doono.
Akhiriso Magaca, iyo Waxa uu ahaa Ninkii isku Qarxiyay Booliska iyo meelaha... Shil Tareen oo labo qaybood u kala jaray bas ay la socdeen ciyaale iskuul fara...